Maxkamad Ingiriis ah oo diiday inay u gacan geliso Mareykanka aasaasihii WikiLeaks
HomeWararka CaalamkaMaxkamad Ingiriis ah oo diiday inay u gacan geliso Mareykanka aasaasihii WikiLeaks
2 weeks ago Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
AP Sawir / Frank Augstein
Go’aanka maxkamadda Ingiriiska ee ah in aan dib loogu celin Mareykanka aasaasihii WikiLeaks Julian Assange ayaa soo jiitay warbaahinta Sweden, maadaama warbaahinta Sweden badankood ay warkaasi ku qoreen websaydyadood.
Maanta, maxkamadda Ingiriiska waxay ogaatay in Assange, oo lagu eedeeyay basaasnimo iyo burcad-badeednimo, aan loo celin karin Mareykanka sababo caafimaad awgood, laakiin go’aanka maxkamadda ayaa rafcaan laga qaadan karaa.
Difaaca Assange wuxuu sheegay inuu qabtay shaqadiisa suxufinimo isla markaana uu Mareykanku u cadaadinayo sababo siyaasadeed awgood, kadib markii WikiLeaks shaaca ka qaaday xadgudubyo iyo xadgudubyo ay geysteen militariga Mareykanka. Xogtan ay daabacday WikiLeaks ayaa xiiso weyn u dhalisay adduunka. Xaakim Vanessa Paraiser oo ka tirsan maxkamada Old Bailey ee London ayaa diiday inta badan doodaha Assange ee ka dhanka ah isu soo celinta, laakiin wuxuu tilmaamay in masuuliyiinta caafimaadka ay ku ogaadeen inuu qabo Caafimaad daro isla markaana ay jirto khatar ah inuu dhinto.
Assange, oo 49 jir ah, ayaa ku farxay go’aanka maxkamadda ka dib, halka gabadha ay is guursadeen, Stella Morris, ay ooysay.
Go’aanka waxaa looga dacwoon karaa maxkamada sare ee UK, iyo mida maxkamada yurub. Marka, xukunka rafcaanka wuxuu qaadan karaa dhowr sano, ilaa Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu ka laabto eedeymaha ka dhanka ah Assange, sida dadka qaar ay qiyaasayaan.